Tun Tun's Photo Diary: Sunset at Kandawgyi garden & hotpot dinner @ Yangon
အထဲကို နည်းနည်းလျှောက်ကြည့်တော့ တိရစ္ဆာန်၇ုံလိုဟာတွေ. တယ်။ ထူးထူးခြားခြား မဟုတ်ပါဘူး။ ကြက်တွေ၊ ငှက်တွေ၊ ဒေါင်းတွေ လောက်ပါပဲ။
ကျောက်ဆည်ဆင် ကနေတာလဲ တွေခဲ့သေးတယ်။ ကြည့်တဲ့သူတောင် သိပ်မရှိဘူး။ ကြည့်၇တာ နေ.စဉ် schedule နဲ. ဖျော်ဖြေ တဲ့ ပုံပါပဲ။
ပန်းခြံထဲမှာ တွေ.ခဲ့တဲ့ ဆိုင်ခန်းလေးတွေပါ။ ဗေဒင် တို. ပုံတူပန်းချီ တို. ဘာဂါ ဆိုင်တို. ရှိပါတယ်။
နေ၀င်ခါနီး အချိန်မှာ တော့ န၈ိုေ၇ာက်ခဲ့တဲ့ ၀င်ပေါက်နားလေးကို ပြန်လာပြီး Sunset ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို. ကြိုးစားပါတယ်။ သိပ်ပြီး ကျေနပ်လောက်တဲ့ ပုံမ၇ခဲ့ပါဘူး။ ဓါတ်ပုံကို ၇ိုက်တဲ့ နေရာ က သစ်သား တံတားပေါ်မှာပါ။ တံတားပေါ်မှာ က လူတွေ များတယ်။ တချို.ကလေးတွေ ဆို ခုံပေါက်ပြီး ဆော့နေကြတယ်။ အဲဒါကြောင့် တံတားက တုန်နေတယ်။ Tripod သုံးပြီး ၇ိုက်သော်လည်း ပုံတွေ က ၀ါးတားတား ဖြစ်နေတယ်။
ဒီပုံတွေ ကတော့ ၇ိုက်ထားသမျှထဲက ကောင်းတယ် လို. ထင်တဲ့ ပုံလေးတွေကိုေ၇ွးပြီးတင်ထားတာပါ။ နောက်တခါ ပြန်မှ နေ၇ာကောင်းကောင်း၇ှာပြီး ထပ်ရိုက်ကြည့်ဦးမယ်။
ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ ညစား စားဖို. အလုံမြို.နယ် ဘက်က Hotpot ဆိုင်ကို သွားပါတယ်။ သူငယ်ချင်းလိုက်ပို.ပေးတာပါ။ အမှန်က ကန်တော်ကြီးကနေေ၇ွတံ၈ုံကို တန်းသွားချင်တာ။ လာခေါ်တဲ့ သူငယ်ချင်းကပြောတယ်။ စားပြီးမှေ၇ွတိ၈ုံ ကိုသွား ဘု၇ားက မိုးချုပ်ထိဖွင့်တယ် ဆိုပဲ။
ဆိုင်ကတော့ သားသား နားနား ရှိပါတယ်။ စားတဲ့သူတွေလဲ အပြည့်ပါပဲ။ အသစ်အဆန်းမို.လို.လာစားကြတယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် hotpot ထဲမှာ ထည့်စားမည့် အသားနဲ. အ၇ွက်တွေက သိပ်ပြီးေ၇ွးစ၇ာမရှိပါဘူး။ အလွန် ဆုံးရှိမှ အသားနဲ. အ၇ွက် ၂မျိုးပေါင်းမှ ၁၀မျိုးလောက်ပဲ။ တခြားစားစ၇ာ ဆူရှီ။ အသီး၊ေ၇ခဲမုန်.တို.လဲ ပါပါတယ်။ အဲအချိန်တုန်းက (၂၀၁၁ သြဂုတ်) တစ်ယောက်ကို ၇၀၀၀ကျပ် ပေးရတယ်။
at 4/03/2014 07:46:00 PM
Anonymous April 4, 2014 at 1:50 AM
မိုးအုံ့ တယ်လို့ ပြောချင်တာ ထင်တယ်